Slimbook EXECUTIVE: nyowani uye ine simba laptop kubva kuSpanish | Linux Vakapindwa muropa
Slimbook yakaratidza chigadzirwa chayo chitsva. Iyo laputopu nyowani inouya nenhau dzinonakidza uye yakagadzirirwa iyo inonyanya kudzvinyirira. Zita rake anonzi EXECUTIVE uye inotarisira kukwikwidza muchikamu cheakakwira-ekupedzisira ultrabook malaptop, akadai seMicrosoft Surface kana iyo ASUS ZenBook Ultralight, zvese mukuita pamwe nekugadzira uye zviyero.
Zvakare, iyi laptop inouya senhengo nyowani yemhuri. neakagadziridzwa maficha maringe neSlimbook ProX. Uye ndeyekuti iyo EXECUTIVE ine kureruka kwakanyanya, kuvaka kwakasimba, dhizaini uye inokwezva dhizaini, resolution yepamusoro yekrini, bhatiri rekuwedzera simba rekuzvitonga kuzere, uye kugadzirisa mukubatana.
Iyo Slimbook YEMAHARA maficha hunyanzvi hunhu zvinokatyamadza uye kuti haufanire kurerutsa:
14 ″ chidzitiro iine AR 16:10 uye yakakwirira pixel density resolution (saApple's Retina) ye2880 × 1800 px (3K). Ipaneru rayo ine inonakidza 90Hz zororo reti kuitira kuti usashungurudza maziso ako mukati marefu maawa ekushanda uye kuzadzisa mhedzisiro yakanaka. Izvo zvinouyawo neanti-glare kurapwa uye kupenya kwakakwira kwema400 nits, pamwe ne99% TrueColor gamut yemamwe mavara akafanana nehupenyu.
Uye kana iyo skrini isina kukwana kwauri, ine 3 yemuno vhidhiyo zvinobuda kuti ubatanidze vekunze monitors uye uve neanosvika mana ekuratidzira. Izvi zvinobuda HDMI 4-2, USB-C DisplayPort, uye Thunderbolt 0.
Kuti ufambise iwo mavara, iwe une iyo nyowani Intel Iris Xe GPU ayo ari pamusoro peNVIDIA GeForce MX350 uye iyo AMD Vega 8.
Panyaya yeCPU, ine Intel Core i7-1165G7. Iyo 8-musimboti, 16-tambo 11th Gen processor yakanyanya kugadzirirwa yemabhuku.
Zvichava nazvo modha dzinodzora dzesimba ne fan CPU, ichiwana kunyarara kukuru uye hupenyu hwebhatiri (kusvika maawa gumi nemaviri).
Con 2 slots ye RAM (inosvika 64GB) uye imwe 2 ye M.2 SSD yakaoma dhiraivha (inosvika 2 + 2TB ine mukana we RAID kumisikidzwa). Iyo zvakare inosanganisira WiFi 6, SD kadhi kuverenga, headphone jack, Bluetooth 5.0, Kensington kukiya, uye USB 3.0.
Backlit keyboard uye nyowani yekubata yakakura. Iyo zvakare inosanganisira 720px Webam, 2x2w masipika, uye yakavakirwa-mukati maikorofoni.
Kurema kwekufungidzira ndekwe chete 1 kg anenge, uye ine dhizaini yekunze yakagadzirwa neakakwira magnesium alloy.
Chaja inosanganisirwa uye iwe unogona zvakare kusarudza kuisa distro GNU / Linux kana zvakare dualboot ine Windows kana uchida.
Kana ari mutengo, iri kutanga pa € ​​1299.
Rumwe ruzivo nezve Slimbook EXECUTIVE - Yepamutemo Webhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Slimbook EXECUTIVE: nyowani uye ine simba laptop kubva kuSpanish